Imigaqo-nkqubo Yabucala YeMozilla
Aprili 15, 2014
Yintoni esiyithethayo ngokuthi "inkcazelo yobuqu?"
Kuthi, "inkcazelo yobuqu" ithetha inkcazelo echaza wena, thanda igama okanye idilesi yemeyile.
Nayiphi na inkcazelo engaphandle "kwenkcazelo engeyoyabuqu."
Ukuba sigcina inkcazelo yobuqu ngenkcazelo engeyiyo eyobuqu, siza kuyicingisisa ngokudibanisa inkcazelo yobuqu. Ukuba sisisa inkcazelo yobuqu evela kwinckazelo yobuqu enye inxaleye asiyiyo inkcazelo yobuqu.
Siyifunda injani inkcazelo ngawe?
Sifunda inkcazelo ngwe xa
usinika ngokungqalileyo (umze. xa ukhetha ukusithumelela iingxelo zecrash);
siyiqokelela ngokuzenzekelayo ngeemveliso neenkonzo zethu (umze. xa ibrawuza yeFirefox ihlola ukubona enoba kufuneka ihlaziywe);
omnye umntu esixelela ngenkcazelo emalunga nawe (umze. xa iThurnderbird isebenza nabanikezeli bemeyile yakho ukuseta iakhawunti yakho); okanye
xa uzama ukuqonda ngaphezulu kwenkcazelo esekelwe kuleyo usinike yona (umze. Xa usebenzisa idilesi yeIP ukuze ulungiselela ulwimi lokulusebenzisa kwiinkonzo zethu).
Siyenza ntoni inkcazelo yakho xa siyifumene?
Xa usinika inkcazelo, siza kusebenzisa ngokwendlela osinike imvume ngayo. Ngokuqhelekileyo, sisebenzisa inkcazelo yokunceda ngokunikela nokuphucula iimveliso neenkonzo zethu kuwe.
Sabelana njani neenkcazelo yethu nabanye?
Xa siye sacela saza safumana imvume yokwabelana nabanye.
Inkqubo okanye ukunikezela iinkonzo zakho, kodwa kuphela abo banikezela ukunika abanye ngenkcazelo banikelwa inkcazelo ngendlela evunyiweyo ngabakwaMozilla.
Xa sizalisekisauthumo lwethu lokukhululeka. Ngamanye amaxesha sikhulula inkcazelo ukwenza iimveliso zethu ziphucuke size sinyanzelise ukuvulwa kwewebhu, kodwa xa sisenza njalo, siza kuyekisa inkcazelo yobuqu kwaye sizama ukuvale ngendlela yokunciphisa isichenge esichaziweyo.
Xa umthetho ufuna njalo. Silandela imithetho naphi na sifumana isicela esivela kurhulumente okanye xa kuthunyelwe umsila wengwe. Siza kukwazisa xa ucela ukwazi umntu ofune inkcazelo yakho yobuku ngale ndlela sithintela nabani na ukuba enje njalo. Xa sifumana isicelo esifana nesi, siza kukhulula inkcazelo yakho yobuqu ngentembelo kwaye sinokholo lokuba ifunwa ngabomthetho ukwenza njalo. Akukho nanye into ngalo ngaqo-nkqubo emisela ukuba ungakhusela okanye ukhetho lokuba umntu wesithathu enjenjalo ukufumana inkcazelo yakho.
Xa sikholelwa ukuba kunyanzelekile ukukhusela wena okanye omnye umntu. Siza kwabelana ngenkcazelo yakho ngale ndlela ukuba sikholelwa ukuba kunyanzelekile ukukhusela amalungelo, okukokwethu okanye ukhuseleko lwakho, nolwabanye babasebenzisi bethu, iMozilla okanye uwonkewonke
Ukuba ukumila kwenkampani okanye ukuma kwethu kuyatshintsha (ukuba siyatshintsha, kufuneka, okanye siyabhanga) sinokudlulisela inkcazelo yakho kwabanye okanye kwabasithengayo.
Siyisebenzisa njani ungcino lokhuseleko lwenkcazelo yakho?
Sizinikele ekukhuseleni wena nenkcazelo yakho xa siyifumene. Sisebenzisa ukhuseleko lokoqobo, oloshishino nolobuchwepheshe. Phezu kwemigudu yethu, xa sifumanisa ukuba ukhuseleko lwaphukile, siza kwazisa ukuze uthabathe amanyathelo afanelekileyo.
Asinakuthanda ukuba inkcazelo yakho yobuqu siyigcine ngaphezu kokuba siyidinga, ngoko siza kuyingcina ixesha esiyidinga nesiyiqokelele yona. Xa sele singayidingi, siza kuthatha amanyathelo okuyicima ngaphandle kokuba ifunwa ngabezomthetho ukuba siyingcine.
Yintoni enye omele uyazi
Siyinkampani yehlabathi kwaye iikhompyutha zethu zikwiindawo ezahlukeneyo ehlabathini. Sikwasebenzisa abanikezeli beenkonzo abaneekhompyutha kwiindawo ezahlukeneyo ehlabathini. Oku kuthetha ukuba inkcazelo yakho inokuphelela kwenye yezo khompyutha ekwelinye ilizwe, kwaye elo lizwe linokuba nemigangatho eyahlukeneyo yemithetho yokhusela inkcazelo kunelakho. Ngokusinika inkcazelo, uyavuma ukuba siyisasaze ngale ndlela inkcazelo yakho. Nokuba ukweliphi ilizwe inkcazelo yakho ekulo, siya kusebenzisa imithetho yalo kwaye siya kuzibophelele ngoko kubhalwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala.
Ukuba uneminyaka engaphantsi kweli-13, asifuni inkcazelo yobuqu, kwaye akumele usinike yona. Ukuba ungumzali kwaye ukholelwa ukuba umntwana wakho ungaphantsi kweli-13 usinike inkcazelo yobuqu, sicela usiqhagamshele ukuze kususwe inkcazelo yomntwana wakho.
Kuza kuthiwani ukuba le migaqo-nkqubo yobuqu iyatshintsha okanye nasiphi na isaziso sobuqu?
Kungafuneka senze utshintsho kwimigaqo-nkqubo yobuqu nakwisaziso. Uhlaziyo luza kuxhonywa kwintanethi. Ukuba kukho utshintsho olumandla, siza kuwazisa uhlaziyo ngamajelo aqhelekileyo eMozilla afana neblogi neforam. Ukuqhubeka usebenzisa imveliso okanye inkonzo zethu emva kosuku olubekiwe okanye ukutshintsha isizinzi sokwamkela olo tshintsho. Ukwenza izimvo zakho zisebenze, umele uxhome usuku olusebenzayo ngaphezulu kwiphepha.
Ulwimi Ulwimi Afrikaans عربي Български বাংলা Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español (de España) Eesti keel فارسی suomi Français עברית हिन्दी (भारत) Hrvatski magyar Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 Македонски မြန်မာဘာသာ Norsk bokmål Nederlands Polski Português (do Brasil) Română Русский slovenčina Slovenščina Српски தமிழ் ไทย Tagalog Türkçe Tiếng Việt isiXhosa 中文 (简体) 正體中文 (繁體) isiZulu